Kululekwe osomabhizibisi eHillcrest | News24
Kululekwe osomabhizibisi eHillcrest
Izithombe: zithunyelwe Osomabhizinisi bethamele umcimbi obuse Hillcrest.
KUHLANGANYELE osomabhizini base Hillcrest ngesikhathi kuno mcimbi wokucijisana ngolwazi eHirsch’s.
Isikhulumi sosuku uNks Cindy Stevenson ululeke osomabhizinisi uthe: “Kubalulekile ukuthi uhlezi unomdlandla uma unebhizinisi ngoba umdlandla wakho uzokwenza uhlezi ujabulile. Kmele usebenze kanzima ukuze ufeze amaphupho akho futhi ungavumeli abantu bakwehlise injabulo yakho.”
UNks Gonda Swanevelder obengomunye wosomabhizinisi abebe thamele lomcimbi uthe: “Ngijabulile ukuba ngomunye wabathamele lo mcimbi ngoba kuningi esiku fundile njengo somabhizinisi.”
Umcimbi wosomabhizinisi olandelayo uzoba ngomhla ka-25 kuNhlaba (May). Uma uthanda ukuba yingxenye yalo mcimbi shayela inombolo ethi: 031 761 7500 noma uthumele ngekheli le email elithi: tarynt@hirschs.co.za.